साउदीमा १५ हजार नेपालीको रोजगारी गुम्यो, इराकमा २० हजार, स्वदेश फर्किन नपाएर अलपत्र !::Leading Nepal News
बैशाख ४, काठमाडौं । साउदी अरवस्थित तीन वटा कम्पनी टाट पल्टिदा झण्डै १५ हजार नेपालीको रोजगारी गुमेको छ । कम्तीमा तीन हजार नेपाली स्वदेश फर्किन नपाएर अलपत्र परेका छन् । उनीहरुको समस्या दिनप्रतिदिन चुलिदो अवस्थामा रहेको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ । यसैबीच सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको इराकमा २० हजारको हाराहारीमा नेपाली कामदार रहेको पनि कान्तिपुरमै खबर छापिएको छ । अवैध बाटो हुँदै त्यहाँ पुगेका उनीहरुले अनेकखाले समस्याहरु झेल्नुपरेको छ ।
सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत एक दर्जन सहसचिवहरूको सरुवा गरेको छ ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रुपनारायण भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।यस्तै अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत साना ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका विष्णु ढकाललाई प्रदेश २ मा, गृह मन्त्रालयका मनोहर खनाललाई गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा, घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शान्तबहादुर सुनारलाई कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सुशील ढकाललाई राष्ट्रिय सूचना आयोगमा, सूचना आयोगकी गीताकुमारी हुमागाइंलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।
कर्मचारी समायोजनको मार स्थानीय तहमा !
नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाको तीनवटा वडा हेर्ने जिम्मेवारी पाएका एक सचिवले कर्मचारी समायोजनको आवेदन दिँदा संघ नै रोजेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ती कर्मचारी समायोजनपछि अहिले गाउँपालिकामा कर्मचारी अभाव भएको छ ।कर्मचारी समायोजनले स्थानीय तहमा अपुग कर्मचारी पदपूर्ति गर्नुपर्ने थियो । तर, भएका कर्मचारी पनि संघमै समायोजन भएपछि अहिले स्थानीय तहमा अपुग कर्मचारीको संख्या झनै बढेको छ ।
समायोजनमा कर्मचारीले दुर्गम स्थान छाडेका छन् । सुगम रोजेर उनीहरू अन्यन्त्र जाँदा दुर्गमका अधिकांश स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएका छन् । किस्पाङ गाउँपालिकाको यो सन्दर्भ यसको एउटा नमुना मात्र हो ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ६० हजार ६ सय ३२ निजामती कर्मचारीमध्ये ९ हजार ५ सय ३४ ले मात्र स्थानीय तह रोजेका छन् । २७ हजार ३ सय २ स्वास्थ्यका कर्मचारीमध्ये २२ हजार १ सय ७६ लाई स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको छ । साविक स्थानीय तहका १२ हजार ९७ लाई समायोजन गरिएको छ । सामान्यका अनुसार ६६ हजार ९ सय ८ दरबन्दीमध्ये ४३ हजार ८ सय ७ को समायोजन स्थानीय तहमा भएको छ । कर्मचारी समायोजनमार्फत पनि सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन सकेन ।
भएका कर्मचारी पनि केन्द्र नै रोजेपछि गाउँपालिकामा काम गर्नै अप्ठ्यारो भएको किस्पाङ गाउँपालिकाका प्रमुख छत्रबहादुर लामाले बताए । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ ।